Shabakadda Marca Oo Soo Saartay Liiska Ciyaartoyda Ay Doonayaan Kooxaha Qaaradda Yurub Ugu Waaweyn.
August 2, 2018 warsame	0 Comments
Bishii July waa laga soo gudbay hadda waxaa August, waana bisha ugu dambeysay oo ay kooxaha qaaradda yurub fursad u heystaan iney suuqa ka dukaameystaan, waxaana xusid mudan in kooxaha horyaalka Ingiriiska ay waqti hore ka bixi doonaan suuqa.
Marka laga tago kooxaha horyaalka Premier League, waxaa jira kooxo kale oo waaweyn kuwaas oo isku dayi doona iney ganacsi sameeyaan ka hor inta aan la gaarin dhamaadka August, waxaana lasoo bandhigay koox walba iyo xiddigaha ay haatan suuqa ka dooneyso.
Los Blancos waxey goor hore soo heshay xiddigaha kala ah: Vinicius Junior, Andriy Lunin and Alvaro Odriozola, balse Cristiano Ronaldo bixitaankiisa ayaa kaga dhigan iney wali u baahan yahiin xiddig kale oo gooldhalinta ku fiican.
Weerarahanada yurub laga qiimeeyo kuwooda ugu doorka roon ayaa lala xiriirinayaa kooxda sida: Harry Kane, Mauro Icardi iyo Robert Lewandowski, balse lama oga hadii xiddigahaas ay heli doonaan.
Dhanka kale Real Madrid waxey dooneysaa goolhaye Thibaut Courtois kaas oo la filayo inuu isaga guuro Chelsea, sidoo kale Eden Hazard ayaa ah mid kale oo ay dooneyso kooxda caasimadda.
Tababare Ernesto Valverde ayaa shaaca ka qaaday in kooxdiisa ay u baahan tahay xiddig khadka dhexe ka ciyaara si loo daboolo boosaska ay baneeyeen Andres Iniesta and Paulinho.
Arthur iyo Malcom ayaa goor hore kooxda kusoo biiray, sidoo kale Clement Lenglet ayey kasoo qaateen Sevilla kaas oo ciriiri galinaya Yerry Mina.
Dhanka kale Barcelona waxey suuqa ka raadineysaa hadda ciyaartoy ay ka mid yahiin: Willian, Adrien Rabiot iyo Paul Pogba.
Diego Simeone goor hore ayuu lasoo saxiixday xiddigaha Thomas Lemar, Gelson Martins, Rodri iyo Santiago Arias, balse wali wuxuu u baahi qabaa inuu ciyaartoy kusoo kordhiyo.
Inkastoo aan la sheegin xiddigaha ay lasoo saxiixan karaan oo ay suuqa ka doonayaan hadana Luciano Vietto iyo Kevin Gameiro ayaa bixi doona.
Kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League lama rajeynayo iney suuqa kusoo laabato, iyadoo suuqa horay uga qaadatay xiddigaha Riyad Mahrez iyo Philippe Sandler.
Ganacsigooda wuxuu u muuqdaa mid dhamaaday, mana jiro xiddig kooxdaan lala xiriirinayo.
Blues waxaa yimid Jorginho oo la mataan ahaa Maurizio Sarri, balse mudada suuqa ka hartay waxey si ba’an ugu mashquuli doonaan iney celiyaan Willian, Eden Hazard iyo Thibaut Courtois.
Kooxda ka dhisan galbeedka London iney suuqa ciyaartoy kasoo iibsato waxaaba kaga culeys batay iney ceshato xidigaheeda ugu muhiimsan.
Jose Mourinho ayaa doonaya inuu saxiixyo kale kooxda kusoo kordhiyo, inkastoo uu keenay Old Trafford Fred iyo Diogo Dalot.
Maamulka Red Devils waxey diyaar u yahiin iney macalinka la shaqeeyaan inkastoo khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay dhamaadkii bishaan, kaliya Yerry Mina ayaa la rajeynayaa inuu kooxdiisa kusoo daro.
Cristiano Ronaldo ayaa kusoo biiray Juventus, balse waxey lumiyeen Gonzalo Higuain kaas oo si layaab leh uga baxay magaalada Turin.
Bianconerri waxey dib usoo celisay Leanardo Bonucci, halka Mattia Caldara uu aaday dhanka Ac Milan isagoo heshiiskaas ka qeyb noqday, si la mid ah Gianluiggi Buffon ayaa ka baxay kooxda kuna biiray Paris Saint Germain.
Perin iyo Concelo ayaa sidoo kale kooxda yimid, mana jiraan ciyaartoy kooxda lala xiriirinayo.
Kooxda faransiiska ka dhisan waxaa si hoose loola xiriirinayaa N’Golo Kante, balse kaliya waxey si weyn ugu mashquuli doontaa sidii ay u ceshan laheyd Neymar Junior.
Sidoo kale Adrien Rabiot iyo Goncalo Guedes ayey isku dayi doontaa iney ceshato.
Kooxda Bavaria waxey keentay Leon Goretzka iyo tababare Niko Kovac, waxaana la filayaa in Arturo Vidal iyo Thiago Alcantara ay isaga tagaan Munich.
← Waa kuwee Dadka kuwa ugu Quruxda badan?
Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia oo ka hadlay qoondada Soomaalida ku leeyihiin Shidaalka Ethiopia →